Ọdịdị ịhụnanya: otu esi amata ha | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 10/06/2022 10:00 | Di na Nwunye na Mmekọahụ
Anya bụ akụkụ nke echiche nke ịhụ ụzọ na-eme ka ha ụzọ anyị si asụsụ ahụ kwupụta ihe anyị na-eche. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ iyi ihe a na-apụghị ikweta ekweta, anya anyị na-egosi ihe ịrịba ama na-edo anya mgbe anyị lere anya ha nwere ike na-anụ ọkụ n'obi Kedu ka esi amata ha?
Ụdị anya a anyị zuru ezu bụ ụfọdụ echiche anakọtara site na sayensị. Ọ bụrụ na ọ dabara na ha bụ ụdị ọdịdị ị chọrọ ịchọpụta, ọ bụrụ na ị masịrị nwa nwoke ahụ ma ọ bụ nwa agbọghọ ahụ, ị ​​ga-ama na gị onwe gị kwa. ha nwere ike iji ha mee onwe ha.
1 Ọdịdị ịhụnanya, kedu ka m ga-esi amata ha?
2 Kedu ụdị ọdịdị ọzọ dị?
3 ọdịdị onwe onye
4 Mgbe ịchọrọ ịmalite romance
5 Mgbe ị chọrọ iji anya gị na-akpagharị
Ọdịdị ịhụnanya, kedu ka m ga-esi amata ha?
Mmadụ nwere ike ịhụ onye ọzọ n'anya, ma ọ ga-egosi na ndị ahụ anya na-aga n'ihu, Ọ ga-ele gị anya ozugbo mgbe ọ na-agwa gị okwu. Ọ bụ ezie na agụụ mmekọahụ n'onwe ya na-emekarị aghụghọ, ma eleghị anya, n'oge ụfọdụ ihere na-eme ka anyị tụgharịa ihu anyị. Ma ọ bụrụ na ị na-aṅa ntị, na anya na-alaghachi, ọbụna ma ọ bụrụ na ihere emewo ọnọdụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla na-akpali mpụga isiokwu, n'ikpeazụ ọ pụghị ida na kpọmkwem anya kọntaktị.
Ị hụtụla mgbe anya na-ebunye ọkụ? Ọfọn, nke ahụ bụ ọdịdị a na-apụghị ịgbagha agbagha, nke na-ebufe mmasị, nwere nchapụta, ume, mgbe ụmụ akwụkwọ na-agbasa. Ọfọn, nke ahụ bụ ụdị anya nke yiri ka ọ na-enyefe mgbe mmadụ ji obi ya hụ n'anya.
Kedu ụdị ọdịdị ọzọ dị?
Enwere ụdị ọdịdị ndị ọzọ nwere ike ime ka ndị ahụ doo anya oge nke agụụ ma ọ bụ mmasị. Anyị na-enyocha otú ọ dị mgbe ị na-ele anya n'akụkụ, mgbe ọ dị omimi ma ọ bụ mgbe ị na-ele anya.
N'etiti ụdị mkparịta ụka ị ga-ahụ mgbe anya ahụ chọrọ igosipụta oge ahụ: Ọ bụrụ na anya gị na-aga n'aka nri ọ bụ n'ihi na ọ na-eche ihe ọ bụ ma ọ bụ na-agha ụgha.
Si anya bulie elu mgbe ọ na-ekwu okwu, ọ bụ n’ihi na ọ na-agbalị icheta ihe ma ọ bụ ọbụna na-aṅa ntị n’ihe ha na-ekwu.
Mgbe anya ahụ gbadara ala Ọ bụ mgbe ị na-agbalị ịbịaru nso na mmetụta uche dị n'ime, megharịa mmetụta ndị ahụ ma mee ka ọ dị ka ọ nwere obi ụtọ ma ọ bụ nwee obi ụtọ na ọnụnọ gị. Hụ ma ọ laghachi azụ tinye ihe oyiyi n'ihu na na-ele gị anya n'ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka ọ na-agaghị echefu otu nkọwa gbasara gị ma chọọ ige gị ntị.
Ọ bụrụ na onye ahụ nwere ọkara-emechi anya, ọ bụ n'ihi na o nwere ike ịkpasu ya iwe n’ihe ma ọ bụ mmadụ, o nwere ike iwewe ya. Ọ bụrụ na ọ na-egbuke egbuke mgbe niile ma ọ naghị elezi anya nke ọma, o nwere ike ịbụ na ọ naghị ezu ike ma ọ bụ na ọ na-ezochi ihe ọ bụla, n’agbanyeghị na e nwere ihe ndị ọ na-eme ka ọ na-afụ ụfụ n’ihi na ọ na-agbalị izochi na ọ bụ ịhụnanya.
ọdịdị onwe onye
Ị ga-enyocha ụdị mmegharị ahụ ndị ọzọ ka ị nwee ike ịkọwa ọdịdị ahụ. Ọ bụrụ na ọ na-ele gị anya na-amụmụ ọnụ ọchịLee ụdị ịmụmụ ọnụ ọchị o nwere. Ọ bụrụ na ntì ya ebili, akụkụ anya ya na-agbakwa agba, ọ bụ n'ihi na onye ahụ ọnụnọ gị na-atọ ya ụtọ na mmetụta ya bụ eziokwu.
Enwere nkọwa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ahụ ọ na-ele gị anya elu na ala ọ bụ n'ihi na ọ na-egosi mmasị dị ukwuu n'ebe ị nọ, na-enyocha gị ma nwee ike ịpụta ọdịdị na-adịghị mma na nke na-adịghị mma. Otú ọ dị, mgbe na-aga n'ihu na-ele gị anya n'anya wee yie ka ọ na-achị gị ọ bụ mgbe onye ahụ nwere ntụkwasị obi nke ukwuu, ọ na-enwekarị ùgwù onwe onye dị elu.
Ọ na -ele m anya, na -elepụ anya ngwa ngwa
Mgbe ịchọrọ ịmalite romance
Ee nke ahụ anya na-abanye ma na-ebubo ya na nchekwa, ọ bụ mgbe anyị nwere ike isi n'akụkụ nke ọzọ hụ otú onye ahụ si adọrọ mmasị. Ọ bụ mgbe anyị ga-egosikwa ụdị anya anyị na-atụgharị n'ihi na n'ezie ike na ume ahụ na-amasị anyị.
O nwekwara ike ime na onye ahụ enweghị ike ile anya, mana ọ na-eme ya na mgbawa, maka ngwa ngwa ma ọ bụ irighiri ihe nke sekọnd. Ọ bụrụ na anya gị adịghị ahụ jụụ, kama ọ na-ewute ya. ọ na-achọ ntakịrị ihe karịrị sekọnd wee pụọ, ọ bụ n'ihi na enwere ụdị mmetụta ịhụnanya.
Si ọ na-ele gị anya ntakịrị ihe na-erughị otu sekọnd wee lepụ anya, naanị gị o nwere ike ịpụta na ị nwere mmasị. Otú ọ dị, lee anya nke ọma ma ọ bụrụ na ọmarịcha ọchị ahụ so ya, ebe ọ bụ na ọ ga-apụta ihe na-adọrọ mmasị karị.
Mgbe ị chọrọ iji anya gị na-akpagharị
Ọ bụrụ na nke gị bụ ịrata, anya nwere ike welie onyinye ahụ i zoro ezo. Akwụsịla nkọwa zuru ezu na nrata gị ma gbalịa ilegide anya mgbe ị na-agwa onye ahụ masịrị gị okwu.
Ma mee ya jụụ, o yighị ka ị na-awakpo oghere gị ma ọ bụ chọrọ ịma jijiji. Ị nwekwara ike ile anya na-agụsi agụụ ike wee lepụ anya maka ụmụ irighiri ihe nke otu sekọnd.
ọ bụrụ na ị bụ nwoke gbasie ike ka i ghara ile ara nwanyi anya, nke ahụ adịghị amasị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ile anya, mee ya nke ọma ma gbalịa ikwukwu okwu ihu na ihu na ile anya n'anya. Ọbụna maka ma nwoke ma nwanyị, anya na-akpali agụụ mmekọahụ adịghị ụtọ, nke ahụ nwere ike ịhapụ mgbe enwerekwu obi ike.
Kaosinadị, ike nkwurịta okwu n'etiti ndị mmadụ ga-amalite, anyị aghaghị ịgbalị ịmata onwe anyị n’onwe anyị ma ghara ikwe ka ihe anyị ga-amụta n’aka ndị ọzọ tụfuo: asụsụ na-abụghị okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Dabara » Di na Nwunye na Mmekọahụ » Anya ịhụnanya: otu esi amata ha